Isebenza njani i-ad
Ukuba awuthandi ukuthintelwa xa usebenzisa i-bras eqhelekileyo, iimpahla zakho zinqongophele, imitya iyaphuma eqongeni kwaye nokuba ibanjiwe kakuhle ngasemva, uhlala usazi malunga nokuwa okanye ukusuka endaweni. Kwakhona, ibhendi eqinileyo okanye i-underwire ingakushiya ngemivimbo enzulu. Nditsho namagwegwe ngasemva awonwabanga kakhulu.
Mhlawumbi uBra oRhoqo uneNkathazo kuwe:
Uhlobo olungalunganga lwe-bra okanye olungileyo lwalo mbandela lunokubangela ukuba uninzi lwebele lubhlungu.
Abafazi abaninzi ngakumbi abo banamabele amakhulu bakhalaza ngokubona iintlungu zangasemva. Oku ngamanye amaxesha akubangelwa bubunzima bendalo yakho kodwa ngenxa yamabhanti ahlala emagxeni akho rhoqo.
IBra yenzelwe ukugcina amabele akho kwaye ngenxa yoko imfuno yokuba nezihlunu zesifuba ezomeleleyo iya. Kodwa ngenxa yokuba izihlunu zakho ziqhelene nayo, ngokwendalo baphelelwa ngamandla okugcina amanenekazi akho eqinile.
Enye ingozi yempilo evela kwi-bras yi-lymph node blocking. Isibindi esiqinileyo asivumeli amabele akho ukuba angakhuphe ulwelo lwe-lymphatic kwaye ingakhokelela nakumhlaza webele.
Yintoni uBraved Adobe?
Ngaphambi kokuba sikuxelele konke malunga nokunxiba i-stick kwi-bra, makhe siqale ukukuxelela ukuba zeziphi ngokwenene. Iibrashi ezinamathela, ezinamathele kwi-bras, okanye kwi-brasive adhesive njengoko zihlala zibizwa njalo zizo zichazwa kakuhle njengezintambo ezingenasiphelo, ezingenamqolo ezingenamathele ezinamathele kwicala elingaphantsi lamabele zisebenzisa ukubambelela kwinqanaba lokunyanga. I-Bras luhlobo lwesambatho sangaphantsi sabasetyhini esenzelwe ukunika inkxaso kumabele kunye nokuthintela iingxaki ezinje ngokugabha kunye nentlungu yangasemva enokubangela ubunzima kakhulu. Benza umzobo wabasetyhini kwaye baphakamisa amanenekazi amabini, banika umzimba ojikeleze kakuhle. Nangona kunjalo, ii-bras ezininzi ziye zaphuma kwimpahla yokunxiba kwaye loo ngu-hayi omkhulu! Kulapho uncamathele kwi-bras eza kuhlangula.
Zihlala zenziwe nge-silicone, i-polyurethane, okanye izinto ezifanayo. Zizilungele kakhulu iimpahla ezinxiba ezingenamqolo, ezinganxibanga, egxalabeni, okanye isambatho esityhutyha indawo ethe tyaba. Yenzelwe ukubonelela ngenkxaso efanayo kwizibeleko zowasetyhini njenge-rhoqo rhoqo, ukuphuculwa kwe-cleavage, kunye nokujonga okuphakanyisiweyo ngaphandle kokubonakala ngokwenyani. Inqanaba loku konke oku ngokuhluka kuyahluka kodwa bayawufumana umsebenzi!
Ukusebenza kweBra Yesinamatheliso:
Iibhrashe ezinamathela ziyathamba kwaye ziba bhetyebhetye ngakumbi ngenxa yokuba unokuzinamathela nje, ezenza ukuba zikhululeke ukunxiba. Akukho zikhundla zangaphantsi zibambelela ngaphakathi kubom bakho.
Abafazi abaninzi bayakhalaza ngokufumana iintlungu zangasemva. Kodwa nge-adhesive bra, ayisiyiyo le meko ukuze uyonwabele inkxaso ngaphandle kwentlungu.
Ngeebhulethi ezinamathelayo izihlunu zakho zesifuba zemvelo kusafuneka zenze umsebenzi wazo, oko ke kuthintela ukukhukuliseka.
Isibindi esiqinileyo asivumeli amabele akho ukuba anganciphisi i-lymphatic fluid.However, nge-adhesive bra, ayisiyiyo le meko njengoko ivumela ukubambeka ngakumbi.
Emva kokuba unxibe i-bras enamathelayo umva wakho kunye nentamo yakho isenokuthi ikhulule.
Ukuhlamba nokucoca isitya sakho esincinci:
I-alcohol free detergant
Qiniseka ukuba zozibini izandla zakho zicocekile kwaye ioyile ayinasimahla
Vula i-bra, ukhwetha iplasitiki ekhuselayo ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle.
Okokuqala, gxobhoza i-br ngamanzi acocekileyo.Printa isikhafu esincinci kwi-adhesive bra.Ukusebenzisa ngokucocekileyo coca indawo yekomityi.Clean in ukuhamba kwesetyhula usebenzisa itiphu yomnwe (hayi ngomnwe womnwe) Musa ukusika indawo yokubambelela usebenzisa isikhonkwane somnwe.Wash ngobunono ngamanzi acocekileyo .
Yiyeke yome ngokwendalo / ngokwasemoyeni. (Khusela ukukhanya kwelanga)
Coca kwaye womise ulusu lwakho, susa ioyile yomzimba kunye nentsalela kulusu.
Beka icala elinye ngexesha
Qhagamshela umphambili wangaphambili.
Khusela ukubamba ngesandla zombini kwiikomityi ze-bra cinezela umzuzwana.
Izinto ezinobungozi ezinokwenzeka kunye nezinye iingozi
Nangona emva kwayo yonke le nto ucinga ukuba yintsikelelo kangakanani i-stick-on bra kwaye iyenze kanjani lula impilo, asinakuligcwalisa eli nqaku ngaphandle kokukuchaza ngokupheleleyo iingozi zempilo ezinokubakho ngenxa yabo.
Ukucaphukisa ulusu: Ngamanye amaxesha iikomityi ze-silicone zenziwa ngezinto ezikumgangatho ophantsi kwaye kungakhokelela ekurhawukeni nasekucatshukeni kwesikhumba. Nokuba ukubambelela kunyango kunokubangela i-allergies kunye nokuphendula emzimbeni wakho.
Iingxaki zokuphefumla eziphantsi: I-Silicone ineqondo eliphantsi lokuphefumla kwaye inokubangela iingxaki ngakumbi ukuba uyinxiba rhoqo.
Isebenza njani indlela yethu yokubambelela:
I-adhesive bra yethu iphuculwe ngakumbi kune-adhesive bra yesiko:
Zethu I-adhesive Bra Ukuqinisekiswa kokusingqongileyo.Ungakhathazeki ngolusu lwakho, i-adhesive i-up up eyenziweyo eyenziwe ngesilonda esenziwe ngolusu inokubonelela ngamava angazange abekho ngaphambili ngaphandle kokubangela iintlungu.kwenziwe ngejeli yonyango ye-gel-hypoallergenic, inokuba yokhuseleko, isempilweni kwaye unxibe kakuhle nakolusu olubuthathaka kakhulu.
INSTANT BREAST LIFT, uphakamisa kwangoko malunga ne-3cm, sikubonelela ngeesayizi ezi-3 ukuba ukhethe, abafazi abahlaziyiweyo batyhalela phezulu i-strapless backless engabonakaliyo inkulu kwaye ikhululekile ngokwaneleyo ukuba igubungele isifuba sakho.I-self adhesive push up up bras inamathele kakhulu kwaye ingahlala kuyo beka kakuhle ukukhusela ibele lakho ngokupheleleyo ekuthini ungayixhasi kwaye igcinwe ivuselelekile kwaye ilungile. Ngenxa yokuyilwa kwemingxunya yokuphefumla esijikeleze kunye nentliziyo, kufuneka uphefumle.
Ukuzinamathela, i-100% ekhuselekileyo kunye ne-silicone enobungozi kulusu, ithambile kwaye ikhululekile ukunxiba, ilungele ulusu olubuthathaka. I-silicone enamathela eqinileyo ihambelana nomlinganiso wakho ngaphandle kokuhlala kwindawo, gubungela yonke indawo yecala lobisi ngokuqaqambileyo. Indlela ethe-ethe yokuhamba nge-bra-less.reusable kangangexesha elininzi.Mva kokusetyenziswa nganye, hlambulula ngamanzi afudumeleyo ngaphantsi kwe-30.℃, amanzi kunye nesepha ethambileyo emva koko yome ngokupheleleyo umoya.
I nipplecovers ezinamathela I-silicone ekhuselayo inamathele kwi-silicone ekhuselekileyo kwindawo ukuze ikwazi ukujikajika amabele akho, kunye nokugcina amabele axhaswe kwaye e-perky. Izisombululo ezifanelekileyo zezinto eziPhezulu, iihempe zeBlouse, iiStrapless, Backless, Deep-V, isinxibo somtshato, kunye neeGown.
Uyilo olwahlukileyo kunye nebakala lokunyanga le-gel-hypoallergenic njengolusu lwesibini, lukhululekile ngakumbi kwaye lubhengeza imini yonke.